विद्यालय अघिल्तिर एम्बुलेन्स, बरण्डामा मेस ! कता छन् विद्यार्थी र शिक्षक ? | EduKhabar
विद्यालय अघिल्तिर एम्बुलेन्स, बरण्डामा मेस ! कता छन् विद्यार्थी र शिक्षक ?
बागमती (मकवानपुर) – बाटो भरि मानिसको ओहोर दोहोर ।
भौतिक दूरी ?
- भो छोडिदिनुस् । मान्छेहरु कुम जोडेरै हिँडेका छन् ।
किराना पसलमा मान्छेको ठेलामठेल छ !
होटलहरू खाली छैनन् ।
चोक, चौतारो, चिया पसलमा हुने राजनीतिक गफ, पहिले भन्दा बढि नै भएका छन्, घटेका छैनन् !
गफिएर बस्नेहरुको भिडमा नियालेर हेर्ने हो भने शिक्षककै संख्या ठूलो देखिन्छ !
साउनको पहिलो साता यो सम्बाददाता बागमती गाउँपालिका घुम्दा अधिकाँश खेतमा भर्खर रोपाईं शुरु हुँदै थियो । साउने झरी सँगै वहेको हावाले ल्याएको हिलो माटोको तिख्खर गन्ध मास्क छिचोलेर नाक सम्म पुगेको थियो । गराहरुमा रोपाहारहरुले गुनगुनाएको असारे भाकाको गति र लय चाँहि सिधै कानमा ठोक्किदैँ थियो ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाबाट ४२ किलोमोटर पूर्वमा रहेको बागमती गाउँपालिकाका खोला र खोल्साहरुमा पौडि खेल्ने र माछा मार्नेहरुको भिडमा भने बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य देखिन्थ्यो !
पहेँलो रंगको ठूलो भवन ! भवन अघिल्तिरको चौरमा एम्बुलेन्स !
कोठा भित्र पस्ने ढोकै छेउमा बेञ्च । र, बेञ्चमा बसेर खाना खाँदै गरेका केही मानिसहरू ! यति चित्रण गरे पछि तपाईले ठान्नु भयो होला – यो अस्पताल हो !
एक छिन पख्नुस् त !
- यो अस्पताल होइन । यो त बागमती गाउँपालिकाको सबै भन्दा ठूलो विद्यालय – जनता माध्यमिक विद्यालय हो ।
गाउँ पुरै घुमि सकेर विद्यालय हातामा छिरे पछि बल्ल तपाईलाई हेक्का हुने छ – संसार कोरोना भाईरस कोभिड १९ को महामारीसँग पो जुधिरहेको छ !
त्यसैले यो विद्यालयमा क्वारेण्टाईन बनाईएको छ ।
अनी, तपाईंको मनमा पनि यो सम्बाददाताको जस्तै प्रश्न उब्जन सक्छ – सरकार, लकडाउन विद्यालयमा मात्रै लागू हुन्छ, हो ?
यहाँ पढ्ने बालबालिका र पढाउने शिक्षक कता छन् त ?
कोरोनाका कारण पठन पाठनमा आएको अड्चन फुकाउन वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ निरन्तर राख्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिका सरकारले गत असार १ गतेबाट लागू भएको घोषणा गरेको छ ।
प्रविधिको पहुँचका आधारमा विभिन्न ५ वर्गमा बालबालिकाको वर्गिकरण गरेर सोही अनुसार सिकाइ निरन्तर गरेको प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका थिए ।
उसो भए शिक्षकले त्यही विधिबाट आफ्ना विद्यार्थीलाई सिकाइमा संलग्न गराएका होलान् कि !
गाउँपालिकामा टेलिफोनको कुरा त छोडिदिनुस्, बिजुली पनि सबै क्षेत्रमा पुगेको छैन । डाँडाकाँडा भएको यस गाउँपालिकामा औँलामा गन्न सकिने मात्रामा टेलिभिजन र वाइफाइवाला ईण्टरनेट छ । मोबाइल त छ तर 'नेटवर्क'को समस्या छ ।
गाउँपालिकाको आफ्नै रेडियो छैन । तराईका कुनै कुनै रेडियोका 'सिग्लन' कुनै कुनै ठाउँमा मात्रै टिप्छ । सरकारले तयार पारेको वैकल्पिक शिक्षणका पाँच विकल्प मध्ये ४ विकल्प प्रयोगमा ल्याउन नसकिने ठहर गाउँपालिकाले गरेको छ ।
सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूहका लागि 'प्रिण्ट सामग्री प्रयोग गर्ने' भन्ने निष्कर्ष प्रधानाध्यापक बैठकले निकाले पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
प्रष्ट नीति नहुँदाको पीडा
गाउँपालिकामा रहेका ५० वटा विद्यालय मध्ये जनता माविमा क्वारेण्टाईन छ । क्वारेण्टाईनका कारण विद्यालयले ६५ प्रतिशत भन्दा बढि विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न नै सकेको छैन ।
तर, विद्यालयले आफ्नो क्षेत्र भित्र ५ वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू तयार भने पारेको छ । तिनै सिकाइ केन्द्रमा बालबालिका भेला पारेर शिक्षकहरुले गृहकार्य दिने शैली शुरु भएको छ ।
ती ५ वटा सिकाइ केन्द्रहरूमा त्यहीँ नजिकैका शिक्षकहरूबाट पाठ्य पुस्तकमा आधारित भएर पाठलाई सहजिकरण गर्दै गृहकार्य दिने गरिएको छ प्रधानाध्यापक वसन्त राई भन्छन् यो प्रकृया १५–१५ दिनमा दोहोरिन्छ ।
तर आजसम्म पुस्तक नपाउने विद्यार्थीको हालत के होला ?
शायद अघिनै खोला तिर देखिएका मध्ये कतिपय त्यस्तै बालबालिका पो हुन् की ?
प्रश्नको सहज उत्तर फेला पर्दैन ।
लकडाउनको समयमा विद्यालयहरू खुल्दै नखुलेका भने होइनन् । देवकी माध्यमिक विद्यालय, जनहित आधारभूत विद्यालय लगायत थोरै विद्यार्थी भएका वा सानो क्षेत्र समेट्ने १० वटा विद्यालयहरू जोर विजोर कक्षाका आधारमा चलेका पनि थिए । तर, यो क्रम २ हप्ता पनि टिक्न सकेन । जनहितका प्रधानाध्यापक रत्न बहादुर पुलामी भन्छन् – 'धेरैले चलाएनन् । गाउँपालिकाले 'चलाउनु या नचलाउनु' भनेर ठोस निर्णय पनि दिन सकेन । अन्त्यमा हामीले पनि विद्याल बन्द गर्यौँ ।'
देवकी माध्यमिक विद्यलयले भने अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा दैनिक कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रअ खड्क बहादुर पुलामीका अनुसार ४ वटा सिकाइ केन्द्रमा स्थानीय शिक्षकलाई दैनिक खटाइएको छ । उनका अनुसार विद्यार्थीको उत्साहजनक उपस्थितिले नियमित सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्यो ।
ग्रामिण भेगमा नि:शुल्क कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ पढाई हुने विद्यालयको रुपमा पनि देवकीले आफ्नो पहिचान बनाएको छ । प्राविधिक विषयका शिक्षकहरू जिल्ला बाहिरका भए पनि शिक्षकले वर्कसिट तयार पारेर विद्यालयलाई पठाउने र विद्यालयले प्रिण्ट गरेर विद्यार्थीको घर घर पुर्याउने तथा विद्यार्थीले गरेका कार्य सङ्कलन गर्ने काम चलिरहेको छ ।
बागमती गाउँपालिकामा शिक्षाका मुद्दामा कार्यरत संस्था ’श्रमजीवि युवा मञ्च’का बीर बहादुर राई पनि शिक्षाको सवालमा समयमै निर्णय गर्न गाउँपालिका चुकेको बताउँछन् । सार्वजनिक शिक्षाका सवालमा वकालत गर्दै आएको शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रको सहयोगमा मञ्चले सिकाइ क्रियाकलापमा सहज होस् भनेर गाउँपालिकाको १६ वटा विद्यालयहरूलाई मास्क, सेनिटाइजर तथा बाल्टिनहरू वितरण गर्यो । ती सुरक्षाका सामग्रीहरू पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि मात्रै प्रयोग भए । तर, शैक्षणिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुने वातावरण नै तयार नभएको गुनासो गर्छन् राई ।
दोधारमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक
देवकी माविको कम्पाउण्ड बाहिरको अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा त्यसै विद्यालयको १८ जना विद्यार्थी भुईमा गुन्द्री ओछ्याएर पढिरहेका थिए ।
नेपाली विषय पढिरहेकी कक्षा ३ की रेश्मा थापालाई यसरी पढ्न खुब आनन्द आएछ । उनीले भनिन् – 'कती सजिलो ! धेरै विषय पनि पढ्न नपर्ने । एक डेढ घण्टा पढ्यो अनि घर जान पाइयो ।'
तर कक्षा ८ की तेजिना ग्यालनलाई चैं नमज्जा लागेको छ ।
'स्कुलको बाहिर बसेर पढ्नु परेको छ । भित्र जान पाएको भए बोर्ड थियो । सबै साथी हुन्थे । सबै विषय पढ्न पाइन्थ्यो ।'
अभिभावक पनि दोधारमा छन् । भीमबहादुर राई भन्छन् – 'यत्रो समय भैसक्यो – छोरा छोरीले पढ्न पाएका छैनन् । गाउँमै भएका शिक्षकहरूले घर घरमै आएर पढाइ दिए पनि हुने जस्तो लाग्छ । थोरै थोरै विद्यार्थी बोलाएर स्कुलमै पढाइ दिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर डर पनि लाग्छ । रोग सर्यो भने त सरी हाल्यो फेरि । विदेशबाट आएकाहरू छन् । क्वारेण्टाईनबाट फर्केकाहरू पनि छन् ।'
शिक्षकका आफ्नै कुरा छन् । शिक्षक शङ्खर कुमार पराजुली भन्छन् – 'स्वास्थ्यको जस्तो शिक्षकलाई सुरक्षाको कुनै सामग्री उपलब्ध छैन । पढाउन मन छ । गाउँमै भएका हामीहरू टोल टोलमा पनि पस्छौँ । कतिपय अभिभावकले नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्नु हुन्छ । गाउँपालिकाले यसो गर्नू भनेर निर्देशन पनि दिँदैन । भोलि केही भवितव्य भैहाल्यो भने को जवाफदेही हुने ?'
गाउँपालिकाको आफ्नै समस्या
भर्खर भर्खर शिक्षा अधिकृत भएर बागमती गाउँपालिका आएका हुन् रमेश बिडारी । यही बेला आईलाग्यो कोरोनाको संकट ! आफूले मेलोमेसै नपाएको लज्जा वोध देखिन्छ उनमा ! भन्छन् – 'पालिकामा ५० वटा विद्यालय छन् । पहिला ५ वटा विद्यालयमा क्वारेण्टाईन थियो । अहिले एउटामा घटाएका छौँ । धेरै विद्यालय विकटमा छन् । प्रअ बैठक एकै ठाउँमा एकै पटक बस्नै कठिन छ । त्यहीँ माथि खोला नाला बढि छन् । अलिकति पानी पर्ने वित्तिकै यताको यतै उताको उतै हुन्छौँ । टिभी ईण्टरनेट कतै कतै मात्रै चल्छ । मोबाईलमा रेडियो भए पनि कुनै टिप्दैन ।'
बिडारीका अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नै कठिन भयो ।
संकटका बेला शुरु वैकल्पिक पठनपाठनमा सघाउन संघीय सरकारले पालिकाहरुका लागि भन्दै २५ करोड रुपैंया निकासा गरेको थियो । असार भित्रै सक्नु पर्ने गरी पालिकामा भएका सामुदायिक विद्यालयको संख्याका आधारमा ३, ४ र ५ लाखका दरले उक्त रकम पठाईएको थियो । बागमतीको भागमा ३ लाख रुपैंया आएको थियो तर, समयमा काम नहुँदा फ्रिज भयो ।
'निकासा ढिलो भयो । प्रअ बैठक बोलाएर योजना बनाउन नभ्याउँदै समय सकियो ।' गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलान भन्छन् ।
पानी पर्ने, बाढी आउने, रोपाईँ गर्ने समय भएकोले साउन महिना भरि गाउँपालिकामा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सामान्य अवस्थामा पनि कठिन हुन्छ । यस पटक त चैत देखि नै अन्योल र अनिश्चय शुरु भयो ।
विद्यालय कहिले खोल्ने ? यसको उत्तर महामारीको जोखिमका आधारमा स्वास्थ्य विज्ञहरुले बताउने छन् ।
तर, अब शैक्षिक गतिविधि कसरी र कहिले शुरु होलान् त ?
यसको पनि स्पष्ट उत्तर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि सँग छैन ।
जनता माविका प्रअ वसन्त राई भने भदौ १ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताउँछन् ।
तर, महामारी कसरी अघि बढ्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अझै पनि विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था भएन भने अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू थपेर स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरी नियमित सिकाइ गतिविधि सञ्चालन गर्ने शिक्षा शाखा प्रमुख विडारी बताउँछन् ।
बागमती गाउँपालिका जस्ता विकट क्षेत्रको शैक्षिक समस्याको समाधान काठमाडौंको सिंहदरबार र सानोठिमीका निकायमा बसेर फेला पर्दैन । सबै स्थानका लागि केन्द्रबाटै जारी हुने एउटै निर्देशनको शैली त्याग्न नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेकाहरू तयार हुनु पर्ने छ । स्थान विशेष, अवस्था विशेष फरक नीति अख्तियार गर्ने बाटो नफुकाईदिने हो भने शैक्षिक क्षती बढ्ने पक्का छ । यस तर्फ संघीय सरकारको गम्भिरता कमजोर छ । बाँकी रह्यो स्थानीय सरकार उनीहरुको प्राथमिकतामा शिक्षाका विषय भन्दा धेरै 'अन्य'मा देखिन्छ ।
ठिकै हो गाउँघरका समस्या 'अन्य' पनि छन्, यतिखेर कोरोनाको संकटमा जुध्न स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका पक्कै हुन् । यति हुँदा हुँदै पनि खोलामा दिन बिताईरहेका बालबालिकालाई सिकाइमा जोड्न र चोक चौतारमा गफिएर बसेका शिक्षकलाई बालबालिकासम्म पुर्याउन पनि स्थानीय सरकार सक्रीय हुन ढिलो गर्नु हुन्न ।
त्यसैले गाउँपालिकाका अध्यक्ष घलान सिकाइ केन्द्रहरूलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिइसकिएको बताउँछन् ।
'संभव भए सबैलाई नभए दुई सिफ्ट या जोर बिजोर गरेर कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना छ' उनले भने 'महामारीको त्रासका कारण स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन पर्ने भएकोले २ नम्बर प्रदेश घर भएका शिक्षकलाई गाउँपालिका प्रवेशमा लगाइएको रोक पनि खुला गरिसकिएको छ ।'
मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोब्स आदि सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराएर शिक्षकलाई भदौ देखि शिक्षण गतिविधिमा संलग्न गराउने योजनामा रहेको उनको भनाई छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले भदौ देखि भर्ना शुरु गर्ने निर्णय गरे अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न साउनको अन्त्यसम्ममा बैठक बसेर अघि बढ्ने उनले बताए ।
तर, सिंहदरबार र सानोठिमीको मुख ताकेर हैन संविधानले दिएको माध्यमिक तह सम्म सञ्चालनको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय सरकार गम्भिर हुने र आफ्नो निष्ठामा शिक्षक प्रतिवद्ध हुने वित्तिकै विद्यालय खुलुन् नखुलुन्, बालबालिकाको सिकाइ भने निरन्तर रहने छ । जुन तत्कालको टट्कारो आवश्यकता हो ।
प्रकाशित मिति २०७७ साउन १३ ,मंगलवार
Min Bdr Shahi5 months ago
विद्यालयमा लकडाउन लागु हुनेमात्र होइन । यहाँ त राजनीति लाग्ने । अभाव हुने । धेरै कुराहरूको वास छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो ।